सामाजिक सन्जाल - अमिताभ बच्चन ट्वीटर ह्याक भएपछि तनावमा
कनकाई नदीमा राखिएको प्रेसर कुकर बम डिस्पोज | कोपा अमेरिका क्वाटरफाइनल : कसले कोसँग र कहिले खेल्दैछ ? हेर्नुहोस् ! | कार अनियन्त्रित भई सुनकोशी नदीमा खस्दा २ को मृत्यु | विप्लव समूहका लमजुङ सेक्रेटरी पोखरामा पक्राउ | विप्लव समूहका युवा नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ
अमिताभ बच्चन ट्वीटर ह्याक भएपछि तनावमा
एजेन्सी । बलिउडका अभिनेता अमिताभ बच्चनको ट्वीटर एकाउन्ट सोमबार राती ह्याक भएको छ। पाकिस्तान समर्थित टर्कीको टर्किस साइबर आर्मी अयिल्दिज टोलीले यसको जिम्मेवारी लिएको छ । अमिताभको ट्वीटर अकाउन्टबाट टर्की र पाकिस्तानसँग जोडिएको केही सन्देश पोस्ट भएको थियो। अकाउन्ट ह्याक भएपछि अमिताभको अकाउन्टको प्रोफाइल बदलिएको थियो। अभिताभको फोटोको ठाउँमा इमरान खानको तस्बिर राखिएको थियो। लेखिएको थियो, – ‘एक्टर‘। हेर त केही मानिसहरु पाकिस्तानलाई यसरी माया गरिरहेका छन्।’ अमिताभ ट्वीटरमा खास सक्रिय हुन्छन् र उनको ३ करोड ७४ लाख फलोअर्स छन् ।	थप पढ्नुहोस्
एजेन्सी। आफ्ना २ अर्ब ३० करोड प्रयोगकर्ताका लागि सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले आफ्नो न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्दैछ । उक्त परिवर्तनपछि प्रयोगकर्ताले आफ्ना सबैभन्दा निकट अर्थात् ‘बेस्ट फ्रेण्ड’हरु तथा प्रयोगकर्ताका सबैभन्दा उपयोगी लिंकहरुलाई न्यूजफिडमा सबैभन्दा माथि हेर्न पाउनेछन् । फेसबुकले यस बारेमा धेरै जानकारी प्रदान गर्नका लागि हालै एउटा सर्भेक्षण गरेको छ । जसको उद्देश्य फेसबुक प्रयोगकर्ताले के हेर्न चाहन्छन् र कसको माध्यमबाट हेर्न चाहन्छन् रु भन्ने कुरा थाहा पाउनु थियो ।	थप पढ्नुहोस्
श्रीलंका सरकार द्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध
काठमाडौं । श्रीलंका सरकारले फेसबुक, ट्वीटरलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही दिनअघि इस्टर पर्वमा भएको बम आक्रमणपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत विवाद हुँदा हिंसात्मक घटनासमेत भएपछि सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार श्रीलंकामा फेसबकु, ट्वीटर, ह्वाट्सएपलगायत सन्देश पठाउन मिल्ने अन्य सामाजिक सञ्जालसमेत अस्थायी रुपमा प्रतिबन्धित भएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
कांग्रेसको गुटवन्दी र असफल नेतृत्व
एकतिर कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी शासन भित्र प्रत्येक नेपालि नागरिक उकुसमुकुस बनिरहेका बेला र दिनदाहाडै हत्या,हिसा,बलत्कार,भ्रस्टचार,विसंगती र बेथीतिले देश चुर्लम्म डुबेका बेला कांग्रेस केन्द्रिय स्तरका नेताहरुको ध्यान भने १४ औं महाधिवेशन र आफ्नो गुट उपगुट निर्माण गर्नेतिर अगाडी वढाइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको संगठन प्रति कुनै चिन्ता र मतलब नै छैन नकी कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली जनता सामु गरेको घोर अपमान र जघन्य अपराधको नै ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आइतबार अपरान्हबाट सामाजिक संजाल फेसबुकमा समस्या आएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका साथै इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एप प्रयोगकर्ताले पनि यो समस्या भोगेका छन् । नेपालसहित विश्वभरका प्रयोगकर्ताले यि ३ सामाजिक सञ्जालबाट समस्या भोग्नुपरेको छ । फेसबुक अन्तर्गतको इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा आइतबार दिउँसोदेखि विश्वभर ‘डाउन’ भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । नेपाली प्रयोगकर्ताले ट्वीटरमा फेसबुकलाई मेन्सन गरेर समस्याबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विश्वको सर्वाधिक सुन्दर स्थानमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईं मानिसहरूले आफ्नै तस्बिर लिइरहेको देख्नुहुनेछ। हामीलाई यो नयाँ कुरा हो भन्ने लाग्न सक्छ। किनभने सेल्फी भन्ने शब्दलाई अक्स्फर्ड शब्दकोषमा सन् २०१३ मा मात्र समावेश गरिएको थियो। त्यो शब्द त्यस वर्षको 'वर्ष शब्द' पनि बनेको थियो। यद्यपि सेल्फीहरू फोटोग्राफी जत्तिकै पुराना हुन्। सन् १८३९ मा रोबर्ट कोर्निलियस नामक एक अमेरिकी पुरुषले पहिलो सेल्फी तस्बिर खिचेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
कांग्रेस आई सम्बद्ध छ सय फेसबुक पेज बन्द
एजेन्सी । फेसबुकले भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस आई पार्टीसँग सम्बन्ध भएका छ सयवटा भन्दा बढी पेजहरू हटाइदिएको जनाएको छ। फेकन्यूज भनिने मिथ्या समाचार फैलिनबाट रोक्न सरकारहरूले थप कदम चाल्नुपर्छ भनि फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले आह्वान गरेकाे एकदिन पछि यस्तो कदम चालिएको हाे । उक्त सामाजिक संजालले फेकन्यूजको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भन्ने देखाउन पनि सो कदम चालिएको हुनसक्छ। तर उक्त कम्पनीले भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीसँग सम्बद्ध त्यति धेरै पेजहरूलाई निशाना बनाएको घटना राजनीतिक दृष्टिले पनि उल्लेखनिय छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरुलाई मनभित्रका भावना, रमाइला पल अनि दुख सुख साट्ने माध्यम बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक !!!!! फेसबुकमा कतिपयले रमाइला कुरा लेखेर पोष्ट गर्छन् । कतिपयले आफुले गरेका दैनिक गतिविधी भित्रका कुरा पोष्ट गर्छन् । सहज अर्थमा भन्ने हो भन्ने सामाजिक सञ्जाल नै सुचना छिटो र छरितो माध्यमका रुपमा धेरै जसोले प्रयोग गरेका छन् । अहिले नेपालका अधिकांश मानिसहरु कुनै कुनै तवरले समय निकालेर दिनमा एक फेर सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका हुन्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
बेलिना थापा लमजुङ । लमजुङको क्व्होलासोंथर गाउँपालिका १ कपुरगाउँकी कृपा विकलाई अरुले जस्तै सामाजिक सञ्जाल 'फेसबुक' चलाउने रहर छ ।फेसबुकमा के हुँदो रहेछ भन्ने उनलाई चासो पनि उत्तिकै छ । तर, परिवारबाटै फेसबुक चलाउन रोक लगाएको छ । परिवारको कुरा काट्न नसकेपछि उनले फेसबुक चलाएकी छैनन । ‘सबैले फेसबुकको कुरा गर्छन् । चलाउँछन् । मलाई पनि चलाउन त मन छ नि । तर, के गर्नु परिवारको कुरा नमानौं पनि कसरी’ उनले भनीन्, ‘इमो चलाउने गरेको छु । विदेशमा रहेको श्रीमानलाई यसैबाट भिडियो कल गर्छु । म्यासेज पठाउँछु ।	थप पढ्नुहोस्
यस बर्षको एसईईको नतिजा प्रकाशनको ...